Koety: Eto & Any · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Oktobra 2018 17:13 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra nivoaka tamin'ny Jolay 2007)
Miresaka mikasika ny ankehitrininy sy ny lasany ireo blaogera Koetiana amin'ity herinandro ity. Raha toa ka, eo amin'ny manodidina azy, mikaroka aingampanahy sy tetikasa ho an'ny hoavy ny blaogera roa, miroboka ao amin'ny tantara kosa ny iray hafa mba hamerenana ireo zon'ny Koetiana amin'ny fandidiana mikasika ny hoaviny.
Manondro toerana iray vaovao natao ho an'ny ankizy manana filana manokana i Rayboy.
Al-Kharafi Activity Kids Center no foibe voalohany amin'ity karazany ity ao amin'ny faritra Golfa sy ao Afovoany Atsinanana. Manome fahafahana ho an'ireo ankizy sembana mba hianatra amin'ny alalan'ny lalao sy fialamboly ao anatina tontolo azo antoka sy mahafinaritra izany.
Manana sary vitsivitsy an'ny toerana iray feno kisarisary ‘mozaika’ eo akaikin'ny biraony koa i Patrick ao amin'ny projekt Cyan.
Efa elaela aho no te hamoaka ity lahatsoratra ity, fa tato ho ato vao nanana fotoana nandehanana naka sary na dia etsy akaikin'ny magazay lehibe fivarotana etsy akaikin'ny biraonay ao Salmiya aza izany. Sombiny amin'ny Mozaïka lehibe iray ity, eo amin'ny 36 metatra ny sakany eo ary 10 metatra ny haavony, mitovy amin'ny 2500 pixels eo ny metatra toradroa (sombiny 50 X ary sombiny 50 Y. 50×50=2500) izay midika fa vita avy tamin'ny sombiny eo amin'ny 900.000 eo izany!
Mampifantoka ny saintsika amin'ny tantara i Idip.
يصادف اليوم الرابع عشر من تموز-يوليو ذكرى يوم الباستيل في فرنسا، وثورة تموز في العراق، لذا وجدت هذا اليوم مناسبا للحديث عن معلومة يكررها النائبان، السابق أحمد الخطيب، والحالي أحمد السعدون.
يقول الأحمدان أن السبب الرئيسي لدعوة ممثلي الشعب الكويتي، أي نواب مجلس١٩٨٥، لمؤتمر جدة خلال الغزو العراقي، هو خطاب الرئيس الفرنسي الاسبق فرانسوا ميتران أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي أشار فيه، حسب الأحمدين، إلى حق الشعب الكويتي في تقرير مصير ه
وبعد البحث والتحري في الشبكة العنكبوتية، أدام الله ظلها الوارف، وجدت الخطاب المذكور، وإليكم ما قيل فيه
Androany, faha-14-n'ny volana Jolay no andron'ny Bastille tao Frantsa ary ny Revolisiona nandritra ny volana Jolay tany Iràka, noho izany, heveriko fa andro tsara izao mba hiresahana mikasika ny vaovao mbola averimberin'ireo mpikambana ao amin'ny Parlemanta, Ahmad Al khateeb (mpikambana taloha) sy i Ahmad Al Saudon (mpikambana ankehitriny) . Milaza izy ireo fa ny antony fototra nahatonga ny mpikambana ao amin'ny parlemanta tamin'ny 1985 (ilay nofoanan'ny Emira) ho voaasa tamin'ilay fivorian'i Jeddah nandritra ny fanafihana an'i Iràka no kabarin'ny filohan'i Frantsa teo aloha, i François Mitterrand, teo anoloan'ny Fihaonambe nataon'ny Firenena Mikambana izay nanasongadinany ny zon'ireo vahoaka Koetiana mba handidy ny momba ny hoaviny.
Taorian'ny fikarohana vitsivitsy tao amin'ny Aterineto, nahita ilay kabary nambara teo aho…